Sida loola tacaalo xasaasiyadda daawo la'aan
Aynu isla markiiba si cad u qeexno: Xasaasiyad kasta lagama gudbi karo daawo la'aan iyo caawinta dhakhaatiirta.
Haddii fal-celinta xasaasiyaddu ay saamayso hab-mareenka neef-mareenka ama si xoog leh u yeesho, taasoo keenta barar, guduudasho, cuncun iyo saameyno kale oo jirka oo dhan ah, wac ambalaas ama la xiriir rugta caafimaadka sida ugu dhakhsaha badan. Anaphylaxis, taas oo ah, nooc xasaasiyad daran, waa dilaa oo u baahan daryeel caafimaad oo degdeg ah. Si aad u filayso inaad la qabsan doonto xaaladdan la'aanteed khabiiro takhasus leh waa ugu yaraan mas'uuliyad darro.
Sidoo kale, ma diidi kartid daawooyinka haddii uu kuu qoro dhakhtarka xasaasiyadda.
Laakiin haddii xasaasiyaddu ay dhacdo waqti ka waqti oo ay ku xaddidan tahay wax aan fiicneyn, laakiin calaamado ammaan ah, hindhiso, diif, indhaha iyo sanka oo casaada, lacrimation, falcelinta maqaarka, waxaad isku dayi kartaa inaad ku darto daawo la'aan.
Ereyga muhiimka ah halkan waa isku day. Dawada caddaynta ku salaysan ma bixinayso dammaanad qaadka in dawada aan dawada ahayn ay xaqiiqdii caawin doonto. Si kastaba ha ahaatee, wuu rajeynayaa.
1. Qeex kiciye oo iska ilaali
Xasaasiyaddu waa fal-celin xad-dhaaf ah oo hab-dhiska difaaca oo mid ama mid kale oo xanaaq badan oo jidhka galay. Xanaaqa noocan oo kale ah wuxuu noqon karaa, tusaale ahaan, manka geedaha iyo dhirta. Hadday sidaas tahay, waxay ka hadlaan sanboorka.
Kiciyeyaasha, taas oo ah, walxaha kicinaya falcelinta xasaasiyadda, sidoo kale waa boodhka guriga iyo caarada ku dhex nool, dhogorta iyo candhuufta xayawaanka rabaayada ah, caaryada, cuntada, iyo qaybaha daawooyinka.
Isku day inaad ogaato waxa saxda ah ee kaa dhigaya hindhiso oo oohin. Baaritaankaaga, waxaad diiradda saari kartaa xilliyada iyo inta jeer ee calaamaduhu soo muuqdaan. Tusaale ahaan, haddii xasaasiyaddu ay dhacdo gu'ga, xagaaga dambe ama deyrta hore, iyo waqtiyada kale aad u nooshahay si deggan, waxay u badan tahay inay tahay qandhada cawska. Haddii aad dareen-celin xun ku yeelato sannadka oo dhan, waxa laga yaabaa inay sabab u tahay boodhka guriga, caaryada, xidhiidhka xayawaanka, ama wax aad cuntay.
Sida ugu wanaagsan ee lagu ogaan karo kiciye waa in la iska baaro xasaasiyadda.
Markaad aqoonsato wax xanaajinaya, isku day inaad iska ilaaliso. Tani kaliya ayaa kaa ilaalin karta xasaasiyadda.
2. Isku day in aad iska ilaaliso xasaasiyadda
Xasaasiyadda isdhaafka ahi waa marka falcelinta xasaasiyadda mid ka mid ah ay ka sii darto falcelinta mid kale.
Tusaale ahaan, xasaasiyadda manka bjørk waxaa ka sii dari kara Florin-Dan Popescu. Falcelinta isdhaafsiga ee udhaxeeya hawada hawada iyo xasaasiyada cuntada / World Journal of Methodology, haddii aad cuntid tufaax. Dusha manka dacarka haddii aad uriso chamomile. Dusha timaha bisadda (macnaha qaybaha maqaarka bisadda iyo candhuufta) haddii aad cuntid hilibka doofaarka.
Haddii aad garanayso xasasiyadaada, kala hadal dhakhtarkaaga khatarta xasaasiyadda. Waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad iska ilaaliso oo kaliya xanaaqa degdega ah, laakiin sidoo kale qaar u muuqda cunto ama dhir aan waxba galabsanin.
3. Badso cun basasha iyo toonta
Khudaartani waxay ka kooban tahay quercitin badan, antioxidant, taas oo, sida laga soo xigtay ilo qaar, Jiri Mlcek, Tunde Jurikova, Sona Skrovankova, Jiri Sochor. Quercetin iyo Jawaabteeda Xasaasiyadda Ka-hortagga Xasaasiyadda/Molecules, waxay joojisaa sii-deynta histamiinka. Kani waa magaca kiimikooyinka gaarka ah ee masuulka ka ah horumarinta falcelinta xasaasiyadda.
Isku day inaad cuntadaada ku darto basasha iyo toonta. Mindhaa waxay ahaan doonaan badbaadadaada. Laakiin xaqiiqo maaha: daraasadaha waxtarkooda weli kuma filna.
Haa, qaadashada kaabayaasha quercetin xal maaha. Qaabkan, sifooyinka anti-xasaasiyadda ee antioxidant-ka ayaa si muuqata loo dhimay.
Dean Mitchell MD, Xasaasiyadda, ka faallooda Ilaalinta Guriga Wanaagsan.
Waxaan arkaa kaliya faa'iidada ugu yar ee laga helayo daawooyinkan.
4. Isku day subag
Tijaabo yar oo la kala soocay oo uu sameeyay Andreas Schapowal. Tijaabo aan kala sooc lahayn oo la kontaroolay oo ah butterbur iyo cetirizine oo loogu talagalay daawaynta rhinitis-ka xasaasiyadda xilliyeed / BMJ ayaa muujisay in laga soosaaray subaggu uu waxtar u leeyahay sida antihistamine-ka-ka-hortagga ah. Ugu yaraan ka hortagga rhinitis xasaasiyadeed.
Run, kaliya 131 qof ayaa ka qayb qaatay daraasadda. Tani, marka laga eego aragtida daawada caddaynta ku salaysan, weli kuma filna gabagabada aan caddayn ee ku saabsan waxtarka subagga.
Butterbur / NCCIH ma hayso wax caddayn ah in xididka baadiyaha iyo caleenta laga soosaaray ay kaa caawin karaan falcelinta maqaarka ee xasaasiyadda iyo neefta. Laakiin waxaa jira caddayn ah in subaggu uu sun u noqon karo beerka oo uu keeno tiro ka mid ah falcelinta xun: laga bilaabo belching, madax-xanuun iyo shuban ilaa dareen-celinta xasaasiyadeed ee dadka u nugul manka ka timaadda ragweed, chrysanthemums, marigolds iyo chamomiles.
Sidaa darteed, ka hor inta aanad tijaabin kaabista, hubi inaad kala hadasho dhakhtarkaaga, ugu yaraan daaweeyaha.
5. Ku dar rosemary cuntada
Hal daraasad oo yar oo uu sameeyay Majid Mirsadraei, Afsaneh Tavakoli, Sakineh Ghaffari. Saamaynta rosemary iyo platanus laga soosaaray maaddooyinka neefta ee u adkaysata daawaynta dhaqameed / European Respiratory Journal ayaa muujisay in qaadashada soosaarka rosemary ay si weyn u yarayn karto calaamadaha xun ee neefta oo ay adagtahay in la daweeyo, oo ay ku jiraan kuwa xasaasiyadda. Ka qaybgalayaasha tijaabada ayaa xusay in ay bilaabeen in ay yareeyaan qufaca, ku dhawaad ​​in ay ka takhalusaan xiiqda laabta iyo dheecaanka xaakada ee xasaasiga ah.
Si kastaba ha ahaatee, cilmi baaris dheeraad ah ayaa loo baahan yahay si loo soo gabagabeeyo in rosemary ay tahay anti-xasaasiyadda.
6. Iyo turmeric
Xawaashkani waa isla sheeko la mid ah sida butterbur iyo rosemary.
2016, daraasad tijaabo ah waxaa sameeyay Sihai Wu, Dajiang Xiao. Saamaynta curcumin ee calaamadaha sanka iyo qulqulka hawada ee bukaanka qaba rhinitis xasaasiyadeed / Annals of Xasaasiyadda, Neefta iyo Immunology iyada oo ay ka qayb qaadanayaan 241 qof oo qaba rhinitis xasaasiyadeed. Waxay ogaadeen in kuwa qaatay supplements turmeric muddo laba bilood ah ay si weyn u yareeyeen calaamadaha. Gaar ahaan, dadku waxay yiraahdeen ciriiriga sanka ayaa ku dhawaaday inuu meesha ka baxo.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira cilmi-baaris yar oo ku saabsan sifooyinka antiallergic ee turmeric.
7. Iyo sinjibiil waliba
Laga soosaaray sinjibiisha (500 mg maalintii) ayaa la muujiyay in ay waxtar u leedahay ka hortagga rhinitis-ka xasaasiyadda sida antihistamines-ka-ka-hortagga ah. Waxaa jira ugu yaraan hal daraasad oo uu sameeyay Rodsarin Yamprasert, Waipoj Chanvimalueng, Nichamon Mukkasombut, iyo Arunporn Itharat. Soosaaray sinjibiil oo ka soo horjeeda Loratadine ee daawaynta rhinitis-ka xasaasiyadda: tijaabo la kantaroolay oo la kala soocay/Daawaynta Dhameystirka BMC iyo Daawaynta, xaqiijinta xaqiiqadan.
Maalin maalmaha ka mid ah saynisku wuxuu ururin doonaa xog ku filan oo ku saabsan mawduucan, laga yaabee,, sinjibiilku inuu beddelo kiniinka. Laakiin hadda maaha.
Xuquuqda daabacaada © 2021 - so.kozmikpanda.com, Sida loola tacaalo xasaasiyadda daawo la'aan!